Verizon: Biko Kwụsị Ara | Martech Zone
Enwetara m ozi ederede site na Verizon taa:
Free VZW Msg. Ikuku Verizon na-enye nkwalite ngwanrọ vidiyo nke V. Iji kwalite ma melite ahụmịhe onye ọrụ vidiyo VCAST gị nke ukwuu, gaa nweta ya ugbu a -> Get PIX & FLIX–> Get PIX New -> Get New App -> Entertainment -> V CAST -> FREE Upgrade. Iji pụọ na msgs n'ọdịnihu, zaghachi na 'X'.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-agụta, nke ahụ bụ usoro usoro 7 iji kwalite ngwa VCAST.
Ntuziaka ezigara bụ n'ezie adabaghị. Enweghị m Nweta PIX & FLIX ihe menu na Nweta ya Ugbu a. Verizon zitere m ozi na-ezighi ezi ọ bụ ezie na akaụntụ m na-egosi n'ụzọ ziri ezi ihe ekwentị m nwere.
Ọ bụghị naanị nke ahụ - ịgbaso ntuziaka ndị ahụ, aga m ede ha ma ọ bụ buo ha n'isi n'ihi na enweghị m ike ịnyagharị na nbudata ahụ na-enweghị ịgagharị na ozi ahụ. Withza 'X' dị mfe karịa. Onye ọ bụla na-eche na e nwere ohere ebe a maka Verizon iji melite nyiwe ha?
Tags: mgbasa oziblọgụChicagombipụta ndị nchụ nta akụkọNa-ekwuenweghị nkwekọrịta
Social Media bụ banyere igbu
Dị ka ha chọrọ ụfọdụ nhazi nke oma...
Mgbe mụ na Sprint nọ, ha na-eme otu ihe ahụ. Rụtụ aka na nchịkọta nhọrọ ndị na-adịghị adị ma ọ bụ nye usoro ntụzịaka dị ogologo. Otu njikọ dị mfe na faịlụ .jar na-ezukarị maka software na-akwalite.
Amaara m na MOSH mgbe anyị nwere mmelite ngwanrọ dị mkpa anyị na-ewepụ ya na MOSHpit. Anyị anaghị ewe iwe na ozi ederede na-ewe iwe ma dị oke ọnụ ma kama n'ihi na ọ bụ ihe mbụ na-ebu ibu tupu ị banye na ịntanetị ma ọ bụ mgbe ị kụrụ bọtịnụ aka ekpe iji nweta ịntanetị anyị gwara ndị ọrụ anyị ka ha kwalite. N'ime oge 85% nke niile bụ ihe ọ ga - ewe.
Ọ naghị efu n'oké osimiri nke ozi ederede ndị mmadụ ga-echefu ma chefuo ụzọ ahụ.
Ọ nwere ike ịka mma? N'ezie.
N'ezie msg ị na-anata bụ ozi ndabara, ọ na-enye ntuziaka ndị bụ isi maka mmelite, agbanyeghị, ọ bụrụ na ị nwere ụdị sọftụwia ọhụrụ, ma ọ bụ otu n'ime ekwentị ndị malitere na ọnwa 2 ma ọ bụ 3 gara aga nke ọma wee duh, ọ ga ịdị iche. Ma ọzọkwa ọ bụrụ na ị maara ekwentị gị na otu o si arụ ọrụ mgbe ahụ ị nwere ike ịmara ụzọ dị mkpirikpi. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnweghị mmemme vcast ahụ enweghị isi na mmelite, yana ị naghị eme onwe gị amara ọ gwụla ma ịnwere ohere ịnweta vidiyo vcast ($ 15 vpak ma ọ bụ $ 3 24 elekere elekere) ma ọ bụrụ ime mgbe ahụ ị maara ozugbo ị gbalịrị ịmalite vcast vidio ọ na-akwalite na-akpaghị aka, ogologo akụkọ dị mkpirikpi, ee, ọ bụghị ụdị ara ahụ nke iziga sms ndị ahịa n'efu n'efu ka ị mara maka mmelite, mana ọzọ ma ọ bụrụ na anyị emeghị 'ole n'ime unu ga - akpọ ma were iwe n'ihi na a daghị gị mmelite ahụ?
Na nzaghachi nye ntuziaka ezighi ezi maka ekwentị gị? Ma ọ dịkarịa ala nde 54 nde ndị ahịa na-arụ ọrụ, na oge ọ bụla 600,000 nke gị ga-akpọ n'otu ụbọchị maka enyemaka na ụfọdụ okwu ma ọ bụ ọzọ, ọ bụrụ na oku ọ bụla, na-eche na ịgaghị ebufe gị, na-efu $ 7 mgbe ahụ i nwere ịghọta na ọ bụghị kpọmkwem akụ na ụba apụtakarị maka verizon izipu ahaziri SMS ọ bụ? E wezụga na dị nnọọ abanye n'ime akaụntụ gị na-agbanwe gị ederede ozi njikere ntọala na ị ga-enwe nsogbu banyere ya ọzọ.
N'eziokwu, site na mgbe m natara ozi ndị ahụ na m na-ama ama hụrụ / wụnye update. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ederede dị mgbagwoju anya ka ị ghara iburu n'isi ruo nwa oge maka ịgagharị na ọnọdụ ziri ezi, ị nwere ike iji ekwentị gị mee ihe ọ bụla ma nwee ike ileghara sms ndị ahụ anya wee gaa n'ihu na nnukwu klọb gị.